I-China Natural Muscovite mica powder mveliso kunye nabathengisi | IHuajing
I-Huajing ye-cosmetic grade muscovite mica yamkela izinto zaseTshayina zezimbiwa, izimbiwa zivela kwiLingshou County, kwiphondo lase-Hebei, China. Umgodi unelayisensi yokumba. Izixhobo azinayo i-asbestos, isinyithi esinzima sihlangabezana neemfuno zokuthambisa.
I-Muscovite ye-Mica Powder yendalo
Umba umbala ubumhlophe (ilebhu) Ubungakanani beParticle (μm) D50 pH Hg (ipm) Njengo (ppm) Pb (ipm) Cd (ipm) Umkhosi （%） umgangatho wento Ubuninzi bobunzima g / cm3 ubumhlophe Ukusetyenziswa
WM-60 isilivere emhlophe 82 ukuya kuma-85 150 ～ 170 7 ～ 8 ≤1 ≤1 .10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22 khazimla isithunzi selihlo
WM-100 isilivere emhlophe 82 ukuya kuma-85 90 ～ 100 7 ～ 8 ≤1 ≤1 .10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22
WM-200 isilivere emhlophe 84 ukuya kuma-89 30- 40 7 ～ 8 ≤1 ≤1 .10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.20
WM-325 isilivere emhlophe 84 ukuya kuma-89 18 ukuya 23 7 ～ 8 ≤1 ≤1 .10 ≤3 ＜ 0.5 80 0.16 ubumnandi obuphezulu isiseko, isithunzi samehlo, i-BB cream, i-CC cream, i-blusher
WM-600 isilivere emhlophe 84 ukuya kuma-89 9 ～ 12 7 ～ 8 ≤1 ≤1 .10 ≤3 ＜ 0.5 90 0.14
WM-1250 isilivere emhlophe 83 ～ 88 6 ～ 9 7 ～ 8 ≤1 ≤1 .10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.12
SiO2 Al2O3 K2O I-Na2O MgO CaO TiO2 YFOO3
Ukujonga kwakhona umbala Ubunzima be-Mohs Umlingani we-elastic elubala Indawo yokunyibilika Ukuphazamisa amandla ubunyulu besabelo
650 ℃ Isilivere emhlophe 2.5 （1475.9 ~ 2092.7） × 106Pa 71.7 ~ 87.5% 1250 ℃ 146.5KV / mm > 99.5%
IHuajing I-cosmetic grade muscovite mica yamkela izinto zaseTshayina zezimbiwa, iiminerali zivela kwiLingshou County, kwiphondo laseHebei, China. Umgodi unelayisensi yokumba. Izinto zokufunda azinayo i-asbestos, isinyithi esinzima sihlangabezana neemfuno zezithambiso .Emva kokuhlanjululwa, ukuhlanjwa, ukugaywa, ukubekwa ngesanti kubunzulu baphantsi, inzalo ye-tempreture ephezulu, ekugqibeleni iimveliso zinobunewunewu obuthambileyo, obugudileyo, obuphezulu, ubukhulu be-diameter enkulu, kunye nolusu oluhle .
Iimveliso zinokuhlangabezana neemfuno ezi-2 ezahlukeneyo: i-matte kunye nokuqaqamba Ubungakanani beemveliso bususela kwi-5μm～Ewe, iimveliso zinokuveliswa ngokweemfuno zabathengi zexabiso lokufunxa ioyile okanye umbala wombala wesicelo .Namhlanje, i-cosmetic grade muscovite isetyenziswe ikakhulu kwisiseko, isohlo lamehlo, i-blusher kunye ne-talcum powder, njl.
Yintoni i-Mica Powder ekuSetyenzisweni kweCosmetic?
I-Mica yimveliso yezimbiwa yendalo enozinzo oluphezulu lweekhemikhali kwaye iyinto efakwe ngokupheleleyo, ke ikhuselekile, ayinetyhefu, ayinabungozi kwaye ilungele izithambiso. I-Mica yenye yezinto zegranite, kwaye uzinzo lwayo lweekhemikhali luyafana nolwegranite.
I-Mica wafer inokukhusela imitha ye-ultraviolet kunye ne-infrared ray, ke yinto ebalaseleyo yokulwa i-ultraviolet arhente yezithambiso. Kuba inyulu yendalo, ayinatyhefu kwaye ayinabungozi, inezibonelelo zokuba iiarhente ze-anti-ultraviolet zokwenziwa eziphilayo azinazo. Kuba isiciko sibhityile kakhulu kwaye ubuchule bokugquma bomelele kakhulu, kuphela sisixa esincinci kwezi mveliso ezifunekayo ukwenza umaleko ongabonakaliyo womkhuseli we-anti-ultraviolet kunye nokuqaqamba komphezulu wolusu.
Kuba isitya se-mica silungile kwaye ukugubungela ulusu kuyayeka, akuchaphazeli ukuphefumla kolusu kwaye kwenza ulusu luzive lukhululekile.
Ukufuma akunakungena kwisitya se-mica, esinokuthintela ukukhutshwa kolusu xa kusetyenziswa kwimveliso yokuthambisa.
Imveliso amandla: 1500tons / ngenyanga
Ukupakisha: 500KG / 25KG / 20KG, (PP okanye PE ibhegi)
Iindlela zothutho: isikhongozeli okanye isambuku
Egqithileyo Synthetic mica umgubo
Okulandelayo: calcined mica powder
Umhlaba owomileyo weMuscovite Mica
IMuscovite kunye neMhlohlo wePhlogopite
IMuscovite iPhlogopite Mica
Umhlaba omanzi weMuscovite Mica
Elimanzi mica umgubo & ...
Elungiselelweyo uKhuphiswano amaxabiso Mica Powder C ...
Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kweMicrosoft Powder kwi-Intanethi ...
Ihowuliseyili Mica Powder for Tumblers
Phlogopite mi China ...
Ihowuliseyili eyenziweyo Mica esisangqa ...
Ihowuliseyili Natural Mica Mica ...
Iinkampani zeMveliso zeMveliso ye-Mica Powder ...
Ixabiso lesaphulelo Artisan Mica Powder
Ihowuliseyili Melika Powder for Powder ...
Ixabiso Ihowuliseyili China Cosmetic Grade Mica Powde ...
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwesicelo kwi-Eye Makeup-Synt ...